Ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany afrikanina Alain St.Ange dia manome voninahitra ny tetikasan'ny fiangonana Colin Church of Kenya Black Rhino Aberdare Park | Olona manao vaovao
Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • Vaovao momba ny dia any Kenya • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia
Ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany afrikanina Alain St.Ange dia manome voninahitra ny tetik'asa Colin Church of Kenya Black Rhino Aberdare Park
Enga anie 19, 2021
Ny filohan'ny birao afrikana Alain St.Ange - ankavanana - dia nanome voninahitra ny tetik'asa Colin Church of Kenya Black Rhino Aberdare Park - ankavia.
Home » Lahatsoratra » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany afrikanina Alain St.Ange dia manome voninahitra ny tetik'asa Colin Church of Kenya Black Rhino Aberdare Park
Alain St.Ange, filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina, dia naneho alahelo tamin'ny fahafatesan'ny fiangonana Colin any Kenya.
Ny fiangonana Colin, iray amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana malaza any Afrika Atsinanana, dia maty tamin'ny faha-81 taonany.
Mpisolovava ho an'ny Rhino Mainty izy izay talen'ny Rhino Ark Char charity Trust.
Tsaroana ihany koa ny fiangonana noho ny fahavitan'ilay tetik'asa fefy herinaratra milanja 250 kilaometatra manodidina ny tandavan-tendrombohitra any Kenya hialana amin'ireo mpihaza.
“Nahazo fahafinaretana sy voninahitra ho ahy ny fahafantarana manokana ny fiangonana Colin rehefa avy nisolo tena an'i Seychelles any Kenya sy manerana an'i Afrika Atsinanana ny biraon'ny fifandraisana amin'ny besinimaro, Church Orr & Associates.
"Izy dia mpaka vola ary ambonin'izany rehetra izany dia manana hevitra vaovao hitazomana ireo mpiara-miasa aminy ho eo alohan'ny kitapo," hoy i Alain St.Ange, nisolo tena ny Birao fizahantany afrikanina dia sady minisitry ny fizahantany tany Seychelles no teo.
Colin Church, iray amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana malaza any Afrika Atsinanana, dia efa mpisolo vava ihany koa ho an'ny Rhino Mainty izay filohan'ny Rhino Ark Charities TrUst (2002 - 2012) raha niasa izy hiaro ireo manintona hafa ny Park Aberdare any Kenya ary koa ny bibidia sy ny ala any Kenya.
Colin Church no hahatsiarovana ny fahavitan'ilay tetik'asa fefy herinaratra milanja 250 kilaometatra manodidina ny tandavan-tendrombohitra any Kenya izay natao hitehirizana ireo mpihaza sy biby.
Rhino Ark dia natsangana tamin'ny taona 1988 ho fitokisana mpanao asa soa hanampiana amin'ny famonjena ny mponina Rhino Mainty any Kenya amin'ny tontolo iainana. Tandindomin-doza ny rhino tamin'io fotoana io noho ny fanjonoana be loatra ny tandrok'izy ireo izay tena sarobidy.
Hanafika ny toeram-piompiana manamorona ny valan-javaboary ny bibidia, manimba ny voly ary mamono olona indraindray. Izany dia nateraky ny tahotra sy ny fanodikodinana ny fiainana dia izay niasa ho an'ny mpihaza mpankafy izay mora idirana tamin'izany satria tsy nahita tombam-bidy ny fiarovana ny bibidia na ny toeram-ponenana ala.
Ny fananganana Rhino Ark dia natao manokana hanampiana ny Serivisy Wildlife Service (KWS) hanangana fefy herinaratra manamorona ny faritra amin'ny Valan-javaboary Aberdare eo atsinanan'ny Salient atsinanana izay manana fiompiana biby fiompy avo indrindra sy sisintany mivantana mankany amin'ny tanimboly.
Colin Church dia teraka tao Nairobi tamin'ny 1940, ary maty izy herinandro vitsivitsy lasa izay tamin'ny faha-81 taonany.